Kansalaisopistot.fi » Af-Soomaali / somali
Ma rabtaa inaad baratid waxyaabaha cusub?
Ma rabtaa hibaayad?
Ma rabtaa inaad la kulantid dad cusub?
A kansalaisopisto (isku darka erayada kansalainen, taas oo ah af Finnish ee “muwaadinka”, iyo opisto, af Finnishka oo “xarunta waxbarashada”), waa machad waxbarasho ee diyaariyo joorsooyin kala duwan oo u furan dhammaan dadka degan Finland. Koorsooyinka waxaa loo heli karaa qof walba, iyada oo aan laga eegin da’dooda ama waxbarashada hore. Barashada waxay ku saleysantahay rabitaanka shaqsi walba si ay u bartaan xirfado cusub oo loo guma tallo galin gaarista aqoon rasmi ah ama heerar. Waxaad ka qeybgali kartaa koorso galigaa ama saaxibo aad la gashid ama qaraabo.
Qaar ka mid ah koorsooyinka kansalaisopisto waxay inta badan ku haboonyihiin ka qeybgalayaasha ee aanan ku hadlin af Finnish badan. Kansalaisopisto sidoo kale waxay bixiyaan koorsooyinka luuqada af Finnish-ka. Waxaad bilaabi kartaa aasaasyada, hormari xirfadahaada luuqadaada af Finnish-ka ama ku soo biir koorsada diiradada saarto wada sheekeysiga Finnish. Waxaa sidoo kale jiro koorsooyin u baahan ka qeybqaadashada lagu helayo cilmi wanaagsan oo af Finnish-ka.
Waxaa jiro ku dhawaadkii 200 kansalaisopisto oo Finland oo dhan ah. Magaca af Finnish ee kansalaisopisto can sidoo kale ku dar erayga “työväenopisto” ama “aikuisopisto”, ama kaliya “opisto”.
Tusaalooyinka koorsooyinka laga heli karo kansalaisopisto:
farsamada gacanta (sida tolida iyo falkinta, nijaarnimada, shaqada-biraha iyo farsamada gacanta)
muusiga (sida jiibinta heesida, heesta kaliga ah iyo qalabyo kala duwan)
karinta (sida af cuntada dhaqanka af Finnish-ka, cuntooyinka qudaarta, dubida iyo sharuudaha cunto gaar ah)
luuqadaha (sida af Finnish-ka, af Ingiriiska iyo af Jabaanees)
jimicsiga iyo fayo qabka (sida yoga, dheesha, tababarka jirdhisnaanta iyo jimicsiga fududaanta haweenka)
fanka (sida riinjiyeynta, sawirida, dhoobada)
warbixinta cilmiga farsamada (sida isticmaalka kumbiyuutarka, sawirida iyo dhoor softaweer)
Doorashada koorsada waxay ku kala duwantahay iyo isla koorsada lama siiyo gabi ahaanba kansalaisopisto. Koorsooyinka la bixinayo deyrta simmistar walba sida caadiga ah waxaa lagu dhawaaqaa Agoosto.
Muddada koorsooyinka caadi ahaan waa hal simmistar, midkood gu’ga ama deyrta. Koorsooyinka inta badan waxay kulmaan hal jeer isbuucii, midkood inta lagu jiro maalinta ama maqribka, iyo kulan walba wuxuu socdaa dhoor saacadood. Waxaa sidoo kale jiro koorsooyin dabacsan ee la heli karo. Kansalaisopisto sidoo kale diyaari dhoor qudbadood ee mowduucyo kala duwan. Qidmada koorsada sida caadiga ah waa tobanaan yuuro ah, iyo koorsooyinka qaar waxaa lagu bixin karaa bilaash.
Ka raadi kansalaisopisto kugu dhow mabkaan. Isla bogga sidoo kale waxaa ku jiro ciwaanada kansalaisopisto websaydyada sidoo kale sida xiriirka warbixin kale. Warbixinta koorsooyinka la bixiyo waxaa laga helaa websaydka machad walba. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa xafiiska kansalaisopisto lagu helayo koorsooyinka kugu haboon adiga. Xafiisyada Kansalaisopisto waxay ku siinayaan macaamiisha adeega ugu yaraan af Finnish iyo af Ingiriis. Wixii warbixin dheeraad ah ee sida la iskaga diiwaangeliyo, fadlan la xiriir xafiiska kansalaisopisto ama riix halkaan (af Ingiriis kaliya).
Waxaan filaneynaa inaan kugu aragno kansalaisopisto mar dhow!
Koorsooyinka Kansalaisopisto waxay ku kala duwanyihiin farshaxan illaa muusig, karinta, luuqadaha, jimicsiga jirka iyo farshaxanka.